မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ (Greenhouse gas) များသည် လေထုထဲမှ ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်ပြီး အပူစွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အနီအောက် ရောင်ခြည်များအား စုပ်ယူနိုင်၊ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည့် ဓာတ်ငွေ့များဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်မှာ အခြေခံအကျဆုံး မှန်လုံအိမ် သက်ရောက်မှု ဖြစ်သည်။  ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း အတွေ့များသည့် မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များတွင် ရေငွေ့၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ မီသိန်း၊ နိုက်ထရပ်စ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် အိုဇုန်းတို့ ပါဝင်သည်။
နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ သောကြာဂြိုဟ် (ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်)၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် (မားစ်ဂြိုဟ်) နှင့် တိုင်တန်အရံဂြိုဟ်တို့၏ လေထုတွင်လည်း မှန်လုံအိမ်သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေသည့် ဓာတ်ငွေ့များ ပါရှိသည်။ မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များသည် ကမ္ဘာ့အပူအချိန် အပေါ် သက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမား ရှိသည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များ မရှိလျှင် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်၏ အပူချိန်မှာ လက်ရှိထက် ပိုနှိမ့်ပြီး 33 °C (59 °F) သာရှိမည် ဖြစ်သည်။
၁၈၂၄-ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်ပညာရှင် ဂျိုးဇက်ဖူရီယေးက ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်အကြောင်း စတင်ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေပြင်၊ ရေပြင် စသည်တို့မှ ကောင်းကင်ယံသို့ ပြန်ကန်ထွက်လာသော အပူဓာတ်များကို လေထုတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့ အချို့က စုတ်ယူထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကို ပူနွေးစေသည်ကို ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ဟု ခေါ်သည်။
၁၇၅၀ ပြည့်လွန်နှစ် စက်မှုတော်လှန်ရေး စတင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ လေထုအတွင်း မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ပါဝင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ၂၀ ရာစု ခေတ်လယ်ပိုင်းမှစ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်းသည် လေထုတွင်း မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ သိပ်သည်းမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ကြောင်း သိရသည်။ 
↑ IPCC AR4 SYR Appendix Glossary (PDF)။ 17 November 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Karl TR, Trenberth KE (2003). "Modern Global Climate Change". Science 302 (5651): 1719–1723. doi:10.1126/science.1090228.
↑ Le Treut H, Somerville R, Cubasch U, Ding Y, Mauritzen C, Mokssit A, Peterson T and Prather M (2007)။ Historical Overview of Climate Change Science In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt KB, Tignor M and Miller HL, editors) (PDF)။ Cambridge University Press။ 26 November 2018 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ NASA Science Mission Directorate article on the water cycle။ 17 January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 July 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf AR4 SYR SPM page 5
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့&oldid=728189" မှ ရယူရန်
၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။